Intambo Tapes Imininingwane - China Okuphakade Ubungane Ptfe Tape
Intambo opholile zisetshenziselwa seal, gcoba, futhi kuvimbele kokuquleka ku imishudo threaded, indlebe, kanye nokufakwa kwayo. Basuke esivame ukubizwa ngokuthi:
PTFE ngentambo uphawu tape
tape plumber sika
Intambo opholile kuvame eyenziwe polytetrafluoroethylene (PTFE), a crystalline kakhulu, polymer perfluorinated ukuthi kangcono aziwa DuPont yayo brand futhi bhalisiwe lokuhweba-Teflon. PTFE itheyiphu ine Coefficient eliphansi kakhulu friction, ezinhle chemical ukumelana, ukushisa ukumelana. inertness Chemical kuvimbela cross-ukuxhumanisa futhi kwenza PTFE ngentambo opholile ungumuntu omuhle ukuba izicelo ehilela amakhemikhali ezonakalisayo njengomoya-mpilo ewuketshezi, noma caustics ezifana ammonium hydroxide. Intambo opholile kungabuye ezenziwe polyethylene (PE), a plastic eshibhile esingafuni amanzi namakhemikhali amaningi.
Intambo opholile baphathe Ukucaciswa ezifana:
PTFE ngentambo itheyiphu abahlinzeki ukuchaza imikhiqizo yabo njengoba kungaba Isidlulisilwazi noma ephansi kwabantu. Isidlulisilwazi PTFE ngentambo opholile ngokuvamile abe kwabantu .70 g / cm3 noma 1.2 g / cm3. Low-Ukuminyana PTFE ngentambo opholile ngokuvamile abe kwabantu .37 g / cm3. amandla eqine ungamandla edingekayo ukuze aphule ucezu ngentambo itheyiphu by ukudonsa emaphethelweni okuphambene. Ukunwebeka yintuthuko fraction obuphelele intambo itheyiphu sika ngenxa ukucindezeleka ukungezwani noma ukunwetshwa ezishisayo. Ubukhulu Ezibalulekile Ezingafundwa ngentambo opholile zihlanganisa ubude, ububanzi, kanye ukushuba. Ngokuphathelene substrate kwedivayisi, abanye opholile Teflon zenzelwe ukusetshenziswa ne amapayipi, amashubhu, noma Amapayipi amakhulu eyenziwe aluminium, ensimbi amnyama, noma ithusi. Okunye PTFE ngentambo uphawu itheyiphu ithobela-chrome, ithusi, ingilazi, plastic, noma irabha.
PTFE ngentambo opholile izindinganiso ezimbili eziyisisekelo izinga futhi anemibala for ezihlukahlukene izicelo. MIL-T-27730A iyinhlangano yase-US sebhithi lempi (MIL-SPEC) elicacisa ukushuba ubuncane 3 mils. AA-58092 kuyinto ejwayelekile commercial olondoloza imfuneko ukushuba MIL-T-27730A, kodwa unezela ubuncane kwabantu okuvamile. White PTFE ngentambo itheyiphu inikeza lwezimpawu zibe nzima nge-ezihlukahlukene emalungeni yochungechunge kanye kufanelekile amapayipi kakhulu futhi izinhlelo amanzi ahlanzekile. Yellow PTFE ngentambo itheyiphu yenzelwe ukusetshenziswa imitshingo Amapayipi amakhulu, amabhawodi, ama-valve, threaded igesi imigqa ukuthi baphathe umoya, i-ammonia, i-butane, chlorine, noma i-hydrogen. Pink Teflon ithephu eyenziwe ezisindayo-duty, zezimboni grade PTFE futhi lisetshenziswa commercial noma zezimboni amapayipi izicelo. Green Teflon ngentambo opholile lingasetshenziswa izicelo elingenawo umoya-ukunikeza.